သိုက်နန်းရှင် ရဲ့  ကလဲ့စား.. (ဖြစ်ရပ်မှန်) – NapannSan
သိုက်နန်းရှင် ရဲ့  ကလဲ့စား.. (ဖြစ်ရပ်မှန်)
By Ms.Yellow SanPosted on August 12, 2019 August 12, 2019
“မြရီ​ရေ. မြရီ” အိမ်​​ရှေ့ က ​ခေါ်သံကြား၍​ မမြရီ ထသွား လိုက်​သည် ​။ ကိုထွန်း​အောင်​ ​နောက်​ က တန်းလိုက်​လာသည်​ ။ “ဟင်​” အိမ်​​ရှေ့က မြင်​ကွင်း​ကြောင့်​ နှစ်​​ယောက်​လုံး အံအားသင့်​သွားကြသည် ​။ ကုလားမတစ်​​ယောက် ​ ၊အဝါ​ရောင်​ဆာရီ ခြုံထား သည် ​၊ လက်​ထဲမှာ က​လေး​လေးနှင့်​၊ ဆင်​ဖြူ​တော်​ကြီးစီးလာသည် ​။ ​မမြရီတို့လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ အံ့အားသင့်​​နေတုန်း “ထွန်း​အောင်​ မြရီ ၊နင်​တို့ ဒီက​လေး ယူမလား” ကုလားမက ဆင်​​ပေါ်က ဆင်းလာပြီး ​မေးသည်​။ က​လေး​လေးကို ​ရှေ့တိုးပြသည်​။ “ဟယ်​ က​လေး​လေးက ချစ်​စရာ​လေး​တော့၊ ကိုထွန်း​အောင်​ ဒီမှာကြည့်​စမ်း” ​နောက်​က ​ယောက်ျားဖြစ်​သူကိုပါ ​ခေါ်ပြသည်​။
“ဟုတ်​ပ က​လေးက ဝဝကစ်​ကစ်​​လေးဟ” ကိုထွန်း​အောင်​ကပါ ​ထောက်​ခံ​နေသည်​။ “ယူမှာလား မြရီ” ကုလားမကြီးက ​မေး​တော့ ​မမြရီ ဝမ်းသာအားရ ​ခေါင်းညိမ့်​ပြသည်​။ ကုလားမကြီးက က​လေးကို ကမ်း​ပေး၍ “ငါ့ကို လူစားတစ်​​ယောက်​ ပြန်​ထည့်​​ပေးရမယ်​” ​မမြရီ ဝမ်းသာအားရ က​လေးကိုချီ​နေရင်း လူစားဆိုတာ နားမလည်​။ အလုပ်​လုပ်​ခိုင်းဖို့ ​ခေါ်သည်​ထင်​၍ “ကိုထွန်း​အောင်​ ရှင်​လိုက်​သွား​လေ၊သူက ဘာခိုင်းမလဲမသိဘူး၊က​လေး​လေး​တောင်​ လာ​ပေးထားတာ၊သူခိုင်းတာ​သေချာ လုပ်​​ပေးလိုက်​​နော်​” က​လေးကိုကြည့်​​နေ​သော ကိုထွန်း​အောင်​ကိုလှမ်း​ပြော​တော့ ကိုထွန်း​အောင်​က “​အေးပါ”လို့​ပြောရင်း ဆင်​ဖြူ​တော်​​နောက်​က လိုက်​သွားသည်​။
ကုလားမကြီးက သွားခါနီး စကားတခွန်း​ပြောခဲ့သည်​။ “သူက နင်​တို့ကို ချမ်းသာ​အောင်​လုပ်​​ပေးလိမ့်​မယ်​၊ ဒါ​ပေမယ့်​ သူ့မှာဝဋ်​​ကြွေး​တွေဆပ်​စရာရှိလို့ လူ့ပြည်​လွှတ်​တာ၊နင်​တို့ ​ကောင်းရင်​ ငါတို့က ​ကောင်း​ပေး မယ်​” ​ပြောပြီး ဆင်​ဖြူ​တော်​နှင့်​ထွက်​သွား​တော့သည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​က သူ့​နောက်​က လိုက်​သွား​တော့သည်​။ ​မမြရီ သူ​ပြောသွားတာ​တွေ နားမလည်​​ချေ။ က​လေး​လေးကို မြှူရင်းကျန်​ခဲ့သည်​။ဗဟုသုတမရှိရှာ​သော မမြရီ တစ်​​ယောက်​ ဘာမှနားမလည်​ရှာ…
“က​လေး​လေးက ချစ်​စရာ​ကောင်းလိုက်​တာ”​ ကိုထွန်း​အောင်​ အသံကြား၍လှည့်​ကြည့်​​တော့ မမြရီ အိပ်​ရင်း ​ယောင်​​နေသည်​။ “မြရီ မြရီ” ကိုထွန်း​အောင်​ လှုပ်​နှိုး​တော့ “အင်​” ​မမြရီ အိပ်​ချင်​မူးတူးထလာသည်​။ “က​လေး​လေး​ရော” မမြရီ​မေး​တော့ “ဘယ်​က က​လေးလဲ” ကိုထွန်း​အောင်​ ​ဘေးဘီကိုလှည့်​ကြည့်​၍ ​မေးသည်​။ “အာ အိပ်​မက်​မက်​​နေတာပဲ၊အိပ်​မက်​က ထူးဆန်းတယ်​​တော့……..” မမြရီ က ကိုထွန်း​အောင်​ကို အ​ကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်​သည်​။ “ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့ကဘာ​တွေလဲ မသိဘူး​နော်​၊ ကုလားမကြီးက ​ရွှေ​တွေကို ညွတ်​​နေတာပဲ ဝတ်​ထားတာ” “​အေးပါ ​အေးပါ ပြန်​အိပ်​​တော့၊ဘာကို စိတ်စွဲပြီး မက်​လဲမှမသိတာ၊ပြန်​အိပ်​​တော့” ကိုထွန်း​အောင်​က ​ပြော​တော့ မမြရီ အိပ်​ယာထဲပန်​လှဲလိုက်​သည်​။ စိတ်​ထဲမှာ​တော့ “အဲဒီက​လေး​လေးသာ ငါ တကယ်​ ရရင်​​ကောင်းမှာပဲ” ဟု​တွေးလျက်​။
မမြရီက မနက်​ဆို ဟင်းသီးဟင်းရွက်​​တွေကို ​ခေါင်းရွက်​ပြီး ရွာစဉ်​လှည့်​​ရောင်းရသည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​က ဘာအလုပ်​မှ လက်​​ကြောတင်းတင်းမလုပ်​။ကိုထွန်း​အောင်​ မိဘ​တွေက ချမ်းသာကြသည်​။ သူတို့သားကို ဘာအလုပ်​မှ မခိုင်းကြ။ မမြရီနှင့်​ ဖူးစာကံပါ​တော့ ဆံထုံး​နောက်​ ​သျှောင်​ ပါလာသည်​။ သူ့မိဘ​တွေက​တော့ သား​လေး ဆင်းဆင်းရဲရဲ ​နေရမည်​စိုး၍ ပစ္စည်းဥစ္စာ​တွေ အ​မွေခွဲ​ပေးလိုက်​သည်​။ ထိုလက်​ဝတ်​ရတနာ​တွေကို ထုခွဲ​ရောင်းချရင်း အလုပ်​မလုပ်​ပဲ ​နေလာသည်​မှာ က​လေး(၆) ​ယောက်​သာရလာသည်​။ အ​မွေ​တွေလည်း ကုန်​ပြီ။ မမြရီ အလုပ်​ထွက်​လုပ်​ရ​တော့သည်​။ ကိုထွနိး​အောင်​ကို ​တော်​​တော်​ချစ်​ရှာသည်​။တချက်​က​လေး အပြစ်​မ​ပြော။ အိပ်​မက်​ မက်​ပြီး ​လေးလအကြာတွင်​ မမြရီ ကိုယ်​ဝန်​ရှိလာသည်​။ ကိုယ်​ဝန်​ရှိကတည်းက မမြရီတို့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ လုပ်​ကိုင်​စား​နေရာမှ အဆင်​​ပြေလာသည်​​ပြောရမည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​ အလုပ်​ရသွားသည်​။ မမြရီလည်း ​ဈေး​ရောင်း​တွေ​ကောင်းလာသည်​။ သို့​သော်​….
“​ဒေါက်​ ​ဒေါက်​” မနက်​​လေးနာရီခန့်​။ “ကိုထွန်း​အောင်​ အပြင်​မှာ လူထင်​တယ်​၊ ထပါဦး၊သွားကြည့်​ကြမယ်​” မမြရီ က ကိုထွန်း​အောင်​ကို ဇွတ်​အတင်းနှိုးပြီး တံခါးသွားဖွင့်​သည်​။ “ဟင်​” မမြရီ အံ့သြသွားသည်​။ သူ့​ရှေ့မှာ ဆာရီခြုံထား​သော ကုလားမ တစ်​​ယောက်​ “နနွင်းမှုန့်​ ​ပေးစမ်းပါ” မမြရီ​ရော ကိုထွန်း​အောင်​ပါ ​ကြောင်​​နေသည်​။ ကုလားမက ထပ်​​တောင်းမှ သတိဝင်​လာ၍ သွားယူ​ပေးလိုက်​ရသည်​။ ကုလားမက​တော့ ပြန်​လှည့်​သွားသည်​။ အိမ်​​ရှေ့က မန်​ကျည်းပင်​ကြီး​ရှေ့​ရောက်​​တော့ ​ပျောက်​သွားသည်​။ “ဟင်​” လင်​မယားနှစ်ယောက်​လုံး ​ကြောက်​​ကြောက်​လန့်​လန့်​နှင့်​ ကြက်​သီးများပင်​ ထသွားသည်​။ အိမ်​တံခါး အ​သေပိတ်​၍ အခန်းထဲဝင်​​ပြေးကြ​တော့သည်​။
နောက်​​နေ့​တွေလည်း ​နေ့စဉ်​ရ က်​ဆက်​ လာ​တောင်းသည်​။ ကြာ​တော့ ကိုထွန်း​အောင်​ စိတ်​တိုလာသည်​။ မိန်းမကလည်း ကိုယ်​ဝန်​ကြီးနှင့်​ က​လေး​တွေ လန့့်​မှာလည်း စိုးလာသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ ဒီအပင်​ကြီးကို ရွာထဲက လူစုပြီး ခုတ်​​တော့သည်​။ “ဒုတ်​ ဒုတ်​” ကိုထွန်း​အောင်​ ခုတ်​​နေ​ပေမယ့်​ စိတ်​ထဲမှာ​တော့ တမျိုးကြီး ခံစားရသည်​။ ​ကျောချမ်း​နေသလိုလို ကြက်​သီး​တွေ​တောင်​ ထလာသည်​။ ​”ဝှီး” “ဟိုက်​” ကိုထွန်း​အောင်​ ​ဘေးက ခုတ်​​နေတဲ့သူ​တွေကို လှမ်းကြည့်​သည်​။သူတို့က ​အေး​ဆေးပင်​ ၊ ခုနက သူ့​ဘေးက တစုံတ​ယောက်​ဖြတ်​သွားသလိုကြီး ခံစားလိုက်​ရတာ အ​သေအချာပင်​။
အပင်​လည်း ခုတ်​ပြီးသွားသည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​ စိတ်​အနည်းငယ်​​တော့ ​အေးသွားသည်​။ ညကျ ပြဿနာစ​တော့သည်​။ အိပ်​မက်​ထဲတွင်​ ကုလားမကြီးတစ်​​ယောက်​ ​ရောက်​လာပြီး မျက်​​ထောက်​နီကြီးနဲ့ သူ့ကို လက်​ညှိုးထိုး၍ “ထွန်း​အောင်​ နင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​လိုက်​တာလဲ၊ငါက က​လေးအတွက်​ အ​စောင့်​ထည့်​​ပေးထားတာ၊​ အေး ဒီတခါ ခွင့်​လွှတ်​လိုက်​မယ်​၊ က​လေးကို တခုခုလုပ်​လို​က​တော့ လုံးဝခွင့်​မလွှတ်​ဘူး” ​ပြောပြီး ကုလားမကြီးက ထွက်​သွားသည်​။ “ဟင်း” ကိုထွန်း​အောင်​ လန့်​နိုး​တော့သည်​။သူ့မှာ ​ဇော​ချွေး​တွေ​တောင်​ ပြန်​​နေသည်​။ ​ဘေးမှာ​တော့ မမြရီက အိပ်​​နေရှာသည်​။ သူ့လည်း ကိုယ်​ဝန်​က တဖြည်းဖြည်းရင့်​လာသည်​။
“ထွန်း​အောင်​​ရေ မင်းမိန်းမ ​မွေး​တော့မယ်​တဲ့ကွ” “ဗျာ ဟုတ်​လား ကိုကြီးသာ​မောင်​၊​ရော့ ​အောင်​​မောင်း ဒီစာရင်း​တွေ ဆက်​လုပ်​ထားလိုက်​​တော့၊” ​ပြောပြီး ကိုသာ​မောင်​နှင့်​ အိမ်​ကို​ပြေးခဲ့​တော့သည်​။ “​မွေးပြီဟဲ့ ​ကောင်​မ​လေး​တော့ ” လက်​သည်​ ​ဒေါ်ဘုတ်​ဆုံ၏ အသံကို အိမ်​ဝင်​ကတည်းက ကြားလိုက်​ရသည်​။ “​ဒေါ်ဘုတ်​ဆုံ က​လေး အင်္ဂါ စုံရဲ့လား၊က​လေးအ​မေ​ရော” ကိုထွန်း​အောင်​ အပြင်​က လှမ်း​ခေါ်​မေးသည်​။ “နှစ်​​ယောက်​လုံး ကျန်းမာပ​တော်​” “က​လေးက ဝဝကစ်​ကစ်​​လေးဟဲ့” ​ပြောပြီး ကိုထွန်း​အောင်​ကို ယူလာပြသည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​​ရော မမြရီ​ရော အ​ပျော်​ကြီး​ပျော်​လို့​ပေါ့။ လူစားလဲရ​တော့မည်​ကို မသိရှာ။ …..
က​လေးရက်​နှစ်​ဆယ်​ပြည့်​​သော​နေ့တွင်​…… “မြရီ​ရေ မြရီ ဒုက္ခပါပဲ၊” “ဘာလို့လဲ အရီးရဲ့၊” မမြရီ အိပ်​​နေ​သော က​လေးကို ချ၍ အပြင်​ထွက်​ခဲ့သည်​။ “နင့်​​ယောင်္ကျား ​လေ ၊ဟို ဟို” အရီးက တခုခု ​ပြောချင်​သလိုနှင့်​ မဝံ့မရဲ ဖြစ်​​နေပုံ။ “ဘာလဲ အရီး ကလဲ” “ထွန်း​အောင်​ ကားတိုက်​” “ရှင်​” မမြရီ ​ပြေးထွက်​ခဲ့​တော့သည်​။ကိုထွန်း​အောင်​ ရှင်​​သေလို့မဖြစ်​ဘူး။ ​တွေ့လိုက်​ရ​သော မြင်​ကွင်း​ကြောင့်​ ဆွံအသွားသည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​ ​သွေးအိုင်​ထဲတွင်​ လဲ​နေသည်​။ ​ဘေးမှာ သားနှစ်​​ယောက်​နှင့်​ သမီးကြီးက ထိုင်​ငို​နေသည်​။
“ကိုထွန်း​အောင်​…” သူမ ကိုထွန်း​အောင်​ကို ​ပြေး​ပွေ့သည်​။ တိုက်​တဲ့ကားက ထွက်​မ​ပြေး​ပေ။ ကားသမားကို လူ​တွေဝိုင်း​ပြောသံ​တွေ ကြား​နေရသည်​။ “မဟုတ်​ပါဘူးဗျာ၊ကျွန်​​တော်​ မမူးပါဘူး၊ ကားကလည်း ဘရိတ်​​တွေ ဘာ​တွေ အ​ကောင်း ပါဗျာ၊ သူနဲ့ ကျွန်​​တော်​လည်း ရန်​ငြိုးမရှိပါဘူး၊ကားက သူ့နား​ရောက်​မှ ဘယ်​လို လမ်း​ဘေး​ရောက်​သွားလဲမသိဘူး၊လုံးဝ ထိန်းလို့မရ​တော့တာပါဗျာ” ကားသမား ငိုကြီးချက်​မနှင့်​ရှင့်​ပြ​နေသံကို မမြရီ အတိုင်းသားကြား​နေရသည်​။ အိပ်​မက်​ကို သတိရသွားသည်​။ ဟုတ်​တယ်​ က​လေး၊ က​လေးကို လာ​ပေးတုန်းက လူစား​ပေးဆိုတာ ဒါလား။ အ​တွေး​ပေါင်းချာချာလည်​ပြီး မမြရီမူးလဲသွား​တော့သည်​။
“သွား အဲ့က​လေးကို ​ခေါ်မလာနဲ့၊သူက ငါ့​သွေးသားမဟုတ်​ဘူး၊အ​ဖေကို သတ်​တဲ့သမီး၊ဟဲ့ ယဉ်​ယဉ်​ ပြန်​​ခေါ်သွားစမ်း” မျက်​လုံးပြူး မျက်​ဆန်​ပြူးနှင့်​ သမီးအကြီးမ ယဉ်​ယဉ်​ကို လှမ်း​အော်​​နေသည်​။ “အ​မေရယ်​ ညီမ​လေး သနားပါတယ်​၊သူ့ခမျာ နို့ဆာ​နေရှာတာ” ယဉ်​ယဉ်​ အ​မေဖြစ်​သူကို ​ဖြောင်းဖြသည်​။ “မရဘူး သွား​အေ၊ငါ့​ရှေ့ လုံးဝ ​ခေါ်မလာနဲ့” မမြရီ​အော်​သံကို ​ဘေးအိမ်​က အရီးက ကြားသွားသည်​ထင်​ “ယဉ်​ယဉ်​​ရေ ဘွားဆီ ​ခေါ်ခဲ့ လာ လာ” လှမ်း​ခေါ်ရှာသည်​။ ကိုထွန်း​အောင်​ ​သေတာ သူ့​ကြောင့်​ ။ မမြရီ ​သွေးနုသားနုနှင့်​ စိတ်​​တွေ က​ယောင်​​ချောက်​ချားဖြစ်​​နေ​တော့သည်​။
“​မေ​မေ” က​လေးက ဝူးဝူးဝါးဝါးနှင့်​ လမ်း​လေး​တောင်​​လျှောက်​တတ်​​နေပြီ။ မမြရီက​တော့ ရူး​နေရှာသည်​။ တ​နေ့ “ဒီက​လေးမရှိရင်​ ငါ့​ယောင်္ကျား ပြန်​လာ​လောက်​တယ်​၊ ဟုတ်​တယ်​ ၊ကိုထွန်း​အောင်​ ပြန်​လာမယ်​၊ဒီ​တော့ ဒီက​လေးကို သွားလွှင့်​ပစ်​မယ်​” ​ရေရွတ်​ပြီး က​လေးကို ဆတ်​ခနဲ ​ကောက်​​ပွေ့လိုက်​ပြီး အိမ်​ပြင်​ ​ပြေးထွက်​ခဲ့သည်​။ ယဉ်​ယဉ်​တို့က အလုပ်​သွား​နေသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ ဘယ်​သူမှ မသိလိုက်​ကြ။
“အ​မေ အငယ်​​လေး​ရော” ယဉ်​ယဉ်​တို့ ညီအမ​တွေ ပြန်​လာ​တော့ မမြရီကို လှမ်း​မေးသည်​။ “မရှိ​တော့ဘူး လူ​ပေးပစ်​လိုက်​ပြီ” “အ​မေ ဘာ​တွေ​ပြော​နေတာလဲ၊တကယ်​လား အငယ်​​လေး​ရေ အငယ်​​လေး ၊” ယဉ်​ယဉ်​ အိမ်​အနှံ့လိုက်​​ခေါ်သည်​။မ​တွေ့​တော့​ပေ။ ယဉ်​ယဉ်​တို့​မောင်​နှမ​တွေ ငိုကြ​တော့သည်​။ အ​မေက​တော့ ဘာ​တွေ​ပြော​နေသည်​မသိ၊ တဟားဟားနှင့်​။ “မြရီ နင်​ပဲ ဒီက​လေး ကို လိုချင်​ပါတယ်​ဆို၊နင်​ကတိမတည်​ဘူး၊​အေး နင်​တို့မိသားစု ကစဉ့်​ကလျား ဖြစ်​​စေရမယ်​” ညကျ ​တော့ ကုလားမကြီးက လာကြိမ်းသွားသည်​။ မမြရီက​တော့ ​ကြောက်​လို့​ကြောက်​ရမှန်းမသိ​တော့။
ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ ​ပြောပြီး မျက်​ရည်​​တွေ သုတ်​လိုက်​သည်​။ “အန်​တီ သူ ​ပြောသလို မိသားစု​တွေ တကွဲတပြားဖြစ်​သွားလား” ချယ်​ရီက​မေး​တော့ “​အေး ဆက်​​ပြောပြမယ်​၊ ” “အန်​တီတို့မှာ ​ပျောက်​သွားတဲ့ အငယ်​​လေးနဲ့ဆို၊​မောင်​နှမ ခုနစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​သား​လေး နှစ်​​ယောက်​ပါတယ်​၊ နှစ်​​ယောက်​လုံး ဆုံးသွားပြီ” ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ ​ပြော​တော့ ချယ်​ရီ အံ့သြသွားသည်​။ ​ဒေါ်ယဉ်​ ယဉ်​ စကားပြန်​ချီသည်​။ “ဒီလိုကွဲ့” …… “​ကျော်​​ကျော်​ ဘာဖြစ်​တာလဲ၊​ခြေ​ထောက်​က ​ထော့နင်း​ထော့နင်းနဲ့ ” ယဉ်​ယဉ်​ လှမ်း​မေး​တော့ “ဟုတ်​တယ်​အမ ​ခွေးကိုက်​ခံလိုက်​ရလို့” “ဟုတ်​လား လာ လာ၊အချိုမှုန့်​သိပ်​​ပေးမယ်​”ဆိုပြီး “အန်​တီတို့ ဘာသိဘာသာ​နေလိုက်​တယ်​၊ မကြာပါဘူး၊ ​မောင်​​လေး ​ကျော်​​ကျော်​ ​ခွေးရူးပြန်​ပြီ ​သေသွားတယ်​၊အန်​တီတို့လည်း လူကြီးမရှိဘူး​လေ၊ ဒီလိုပဲ က​လေးချင်း ပြန်​အုပ်​ချုပ်​ရသလို​ပေါ့၊က​လေးအ​တွေး ​တွေးကြတာ​ပေါ့၊​ခွေးကိုက်​တာပဲ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီး အန်​တီတို့ ဗဟုသုတမရှိတာ​ကြောင့်​ ​မောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဆုံးရှုံးလိုက်​ရတယ်​၊ဟီး ဟီး၊အ​မေကလည်း စိတ်​က ​ကောင်းတချက်​ မ​ကောင်းတချက်​” ​ပြောပြီး ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ မျက်​ရည်​​တွေ ကျလာပြန်​သည်​။
“​မောင်​​လေး တစ်​​ယောက်​ကျ ​ကျော်​​မောင်​တဲ့၊ သူက သုံးနှစ်​သားအရွယ်​မှာ အ​မေ စိတ်​ရူး​ပေါက်​ပြီး အရက်​သမားတစ်​​ယောက်​ကို ​ပေးပစ်​လိုက်​တယ်​၊ အရွယ်​​ရောက်​​တော့ ​ရွှေ​တော အလုပ်​သွားတာ တွင်းပိပြီး ​သေသွားတယ်​၊ငယ်​ငယ်​​လေးရှိ​သေးတယ်​ကွယ်​၊ညီမတစ်​​ယောက်​ကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းသားနဲ့ ဖူးစာပါ​ပေမယ့်​ကွယ်​ ၊ကံဆိုးရှာပါတယ်​၊နာဂစ်​မုန်​တိုင်းးထဲ ပါသွားတယ်​” “အဘွား​ဒေါ်မြရီက​ရော”ချယ်​ရီ ဖြတ်​​မေး​တော့ “အဘွား စိတ်​ပြန်​​ကောင်းသွားတယ်​၊သူလည်း သူ့လုပ်​ရပ်​​တွေ သူသိပြီး​တော့ စိတ်​ဆင်းရဲပြီး၊ အိပ်​ရာထဲ ဗုံးဗုံးလဲ​တော့တယ်​၊အငယ်​​လေးကို ရှာ​ပေးပါ၊အငယ်​​လေးကို ရှာ​ပေးပါ ဆိုပြီး တဖွဖွ ​ပြော​နေတယ်​ကွယ်​”
ချယ်​ရီ ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ကို ကြည့်​ပြီး စိတ်​မ​ကောင်း။ “အန်​တီငယ်​​လေးကို ရှာမ​တွေ့ဘူးလားဟင်​” ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​က မျက်​ရည်​​တွေဝဲလျက်​ “ရှာမ​တွေ့ပါဘူးကွယ်​၊အန်​တီတို့လည်း အကုန်​ တကွဲတပြားဆီမှာ၊ကုလားမကြီး ကျိန်​သွားသလို ဖြစ်​​နေတာ ပါပဲ၊​ မေ့လို့ အငယ်​​လေး​မွေးပြီး​တော့ အငယ်​​လေးလက်​က​လေးထဲမှာ ​ရွှေဘယက်​​လေး လာထည့်​သွားတယ်​၊သူ့သိုက်​က လာ​ပေးသွားတာ ထင်​တယ်​၊ဒါ​ပေမယ့်​ အငယ်​​လေးကို ​ပေးလိုက်​​ရော အဲ့ဒီ​ရွှေဘယက်​​လေးကလည်း ​ပျောက်​သွားတယ်​” ချယ်​ရီ မျက်​ရည်​​တွေ ဝဲလာသည်​။
“အန်​တီရယ်​ အဘွား​တွေ့ချင်​​နေတဲ့ အန်​တီငယ်​​လေးကို အမြန်​ဆုံးရှာ​တွေ့ပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​ပေးပါတယ်​” “​အေးပါကွယ်​၊အ​မေက​တော့ သူ့ကို ​တောင်းပန်​ချင်​​နေတယ်​၊” ချယ်​ရီ ၊​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ကို နှုတ်​ဆက်​ပြီးထွက်​လာခဲ့​တော့သည်​။ ရင်​ထဲမှာ မ​ကောင်းလှ။ ဒီကလဲ့စား ဒီမျှနှင့်​ ​ကြေပါ​စေ​တော့….. အမှားပါလျှင်​ ခွင့်​လွှတ်​​ပေးပါ။ကြိုးစား​ရေးသားထား​သော်​လည်း လိုအပ်​ချက်​များရှိ​နေ​သေး၍ သည်းခံပြီး ဖတ်​ရှု​ပေးကြပါ။
ရေးသူ-​နွေဦးပန်း (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
Previous post နေ့လည်ခင်းကြီးတောင် လုယက် ​သောင်းကျန်းနေသူတွေ ကို တာဝန်ရှိသူများ ဖမ်းပေးကြ ပါ…
Next post ဘီးပေါက် သဖြင့် ပြုပြင်ပြီး လမ်းပေါ် သို့ ပြန်အတက် ( ၆ )ဘီးကားနောက် မှ ဝင်တိုက် ( ၂ )ဦး သေဆုံး